के हाे ‘ब्राउजर एक्सटेन्सन’ ? सजिलै बुझ्नुहोस् यसको काम - Tech News Nepal Tech News Nepal
मंगलवार, आश्विन १३, २०७७ १२:०२
काठमाडौं । इन्टरनेटमा तपाईंले ब्राउजर एक्सटेन्सनको नाम त सुन्दै आइरनु भएको होला । तर ब्राउजरमा भएको यो एक्सटेन्सन के हो ? यसले कम्प्युटरमा कसरी काम गर्छ ? कम्प्युटरको ब्राउजरमा एक्सटेन्सनलाई कसरी एड गरिन्छ र? यी प्रश्नहरु तपाईंको मनमा उठेका होलान् ।
एक्सटेन्सनले कम्प्युटरलाई कुनै फाइलको कुन किसिमको हो भनेर बताउने काम गर्दछ । यदि तपाईंसँग विभिन्न किसिमका फाइलहरु जस्तै अडियो, भिडियो, पीएनजी, फिल्म, गेम, प्रोग्रामिङका फाइल छन् ।
यस्तो बेला ती फाइलहरुले के काम गर्छन् र कसरी गर्छन् भन्ने कुरा तपाईंलाई थाहा हुन्छ । तर मसिनलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन । यसकारण मसिनलाई हाम्रो फाइल कुन किसिमको हो र त्यसलाई कसरी रन गर्ने भनेर बुझाउन हामी एक्सटेन्सनको प्रयोग गर्दछौं ।
यसको प्रयोग इन्टरनेटमा मात्र हुन्छ । यसको प्रयोगबाट तपाईंले आफ्नो ब्राउजर एक्सपेरियन्सलाई अलग्गै लेभलमा पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ ।
तपाईंको विण्डोजको युआरएल बारको छेउमा भएका साना-साना सफ्टवेयरलाई नै ब्राउजरको एक्सटेन्सन हुन् ।
तर यसरी युआरएल लेखेर वेबसाइटमा भिजिट गरेर परिक्षण गर्नुभन्दा तपाईले यसको एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्नु भयो भने ब्राउजरबाटै सिधै स्पिड परिक्षण गर्नसक्नुहुन्छ ।